Nke a bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere cillard matraasi
Ngalaba ndị ọbịa na-anabata ndị ọbịa na-eleta ígwè ahụ bulbs, ma ọ dịghị nkwa na ndị ọrụ dị n'usoro n'usoro ndị ọrụ ga-ahapụ ha; Ọ bụrụ na ndị ọchịchị anọghị ebe ahụ, a na-agba ndị ọbịa ume ka ha lelee site na windo. Na December 6, onye dị na Distik kwuru okwu banyere bọlbụ - akwụkwọ akụkọ, nke sitere na Sueddeutchzeziteung, mkpebi nke EU \_ ịhapụ bọlbụ ma dochie ya na bọlbụ dị ala
Ejiri m ihe nkiri 8 10mm iji wụnye ndị na-ekwu okwu a na-egbutu skro na 6mm iji gbochie mmebi ọ bụla na ihu efere ihu. M na-etinye kposara na akpa rọba wee merie ha. Tinyegharịa ihe ị na-eme mgbe ịrapara na mpempe akwụkwọ n'ihu na mpempe akwụkwọ azụ na azụ efere dị ogologo, ma hụ na efere ihu na azụ bụ ihe atụ.